Semalt Kudzidza: Sei Ungagadzira URL Yakakwana KwaSEO?
Tsvaga injini dzinoshandisa URLs kuunganidza zvose data dzavanoungana dzine peji yezvakagadzirwa.Izvo zvakagadzirwa ne URL zvinogona kuita kuti musiyano uone kushandiswa kubatsiro nekutsvakurudza injini. Izvo zvinhu zvakasiyana-siyana zvine hanya muURL kana vamwe vasingaiti.
Mutungamiriri Mukuru weVatengi Muchengetedza Semalt Digital Services, Jack Miller, inopa mazano ekusimudzira SEO yako ne URL dzakakwana.
Uniform Resource Locators (URLs) inozivisa ma browsers uye maseravha kuti uwane peji.Izvi zvakabatana zviri mumutauro unooneka nevanhu, uye basa ravo nderekuvhara maIndaneti zvichienderana nenhamba dziri pasi - grain silo prices.
Kuti URL ionekwe sedzakanaka, inofanira kuva nemashoko kusingapi mazita mazhinjiye tsamba netsamba. Izvo zvinobudirira sezvo zviri muvanhu vanogona kuenzaniswa uye zvisinganyanyi kukosha zvinyorwa zvinokonzerwa zvakarekutsvaga injini. Muzviitiko zvakawanda, URL dzakasikwa zviri nyore nepamusoro pepuratifomu hazvisi shamwari. Zvisinei, ruzhinji rwezvikwataikozvino, inokubvumira kuita URL inobatirika nekushandura tsamba dzisingagoni kushandiswa uye nhamba muhutungamiri hwepaiti uchishandisa mazita emapeji uye nzira.
Chimbofunga mienzaniso miviri inotevera ye URLs.
Pasinei nokuti iyo yechipiri URL haisi shoma shoma, munhu anogona nyore kutaura kuti chiiwebhutti yevashandi vachawana: peji rine chokuita nekupfeka kwevarume.
Kuumba Maonero Akanaka
Izvi zvinotevera ndizvo zvinoda ma URL akanaka pane SEO:
I URL inofanira kuva shoma sezvinobvira uye isingawani nemamwe mashoko kana mahwendefa.
Kuvapo kwemavara e alphanumeric muzasi. Kushandisa zvishoma kuderedzamukana wekugadziridzwa kudarika.
Kushandisa mitemo kuti iparadzanise mazwi. Nzvimbo uye zvidzidzo zvinofanira kudziviswa kubva pakutsvagainjini dzinofunga nezvemashoko akaparadzaniswa nemitemo iyi kuti isarudze mazwi mashoma.
Kushandisa keywords kana zvichibvira.
Kushandiswa kwemashoko makuru kunobatsira zviri nani uye kunowedzerawo ruzivo rwevashandi.
Google inowedzera kuwedzera kusarudzwa kwepuratifomu dzakachengetedzwa dziri paHTTPS protocol.Zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana yemigumisiro yekutsvaga pane peji inobva pazvikamu paHTPPS.
Kushandurwa kweHTTP neHTTPS i-URL inoshanduka, ine huwandu hwakawanda hwezvipingamupinyi.Google inotarisa kuenderera mberi kwakanaka kwakanaka kubvira apo protocol inonzi yakachengeteka. Zvisinei, mitemo 301 inofanira kushandiswa pakuvandudza shandukouye basa rinofanira kuongororwa kuti rione kuti zvinogona kuitika sei.
Hashtags mu URLs
Nhaurirano inogona kugadziriswa zvakanaka inotungamirirwa nekutaura kweimwe URL yepeji imwechete yezvakagadzirwa. AJAX inogadzira URL imwe yemapeji akawanda ezvinyorwa, kunyanya kudzivisa injini yekutsvaga yakasiyanapeji peji iyo, iyo inogona kubatanidza zviratidzo zvemasimba uye zvakakosha.
Nguva yekugadzirisa URLs
Nguva dzakakwana yekugadzirisa URLs inzvimbo yekugadzirisa uye yekufamba. Sekombiki kana siteteknolojia inoshanduka, yekugadziridzwa kwepurogiramu kunogona kuchinja uye saizvozvo, inguva yakakodzera yekuisa zvinoda maererano neIndaneti zvinyorwa uye zviri mukati.
Zvakakosha kuziva kuti URL dzako dzinofanira kunge dzakagadziridzwa chete kana dzichidazvikonzero zvepamhizha kana kugadzirisa zvakare nzira yekudzivisa njodzi.